Anodized Aluminium Sheet Factory - Mpanamboatra Sheet Aluminium Anodized China, mpamatsy
Takelaka aluminium matevina
Ny fanasokajiana finer manaraka dia ny haben'ny fenitra takela-by. Ny haben'ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia misy ny hatevin'ny vy vita amin'ny alimina, ny sakany ary ny lavany. Rehefa manafatra takelaka firaka aliminioma dia afaka mangataka henjana ireo angona ireo ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, araka ny hatevin'ny ravin'ny alimina amin'ny mm, ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia azo zaraina amin'ny karazany manaraka:
Takelaka aluminium fitoeran-javatra mazava tsara
Ny hatevin'ny ravina alimina matevina dia mihoatra ny 2.0mm amin'ny ankapobeny. Ny takelaka aluminium 3mm no karazana vokatra mahazatra indrindra. Ao amin'ny fandrefesana takelaka aluminium, 10 ny takelaka aluminium (2.5mm) ary ny takelaka aluminium 11 (3.0mm) dia vokatra solontena. Ary ny ravina alimina matevina 1 8 dia mitovy amin'ny ravina aluminium 3mm amin'ny ankapobeny.
Takelaka alimina borosy volamena
Ny Anodized Aluminium dia harafesina sy fanoherana ny abrasion izay tsy ho levona, puce, peel, na flake. Ny anodizing dia dingana iray ampiasaina hampitomboana ny hatevin'ny sosona oksida voajanahary eo ambonin'ny faritra vy. Mampitombo ny harafesina sy ny fanoherana anaovana izany, ary mandritra ny fizotrany dia azo nolokoina loko maro samihafa ny velaran-tany alim-bolo.
Takelaka vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny alimika
Ny takelaka vita amin'ny alimina (ACP) vita amin'ny aliminioma vita amin'ny aliminioma (ACM) dia takelaka fisaka izay misy takelaka roa vita amin'ny kofehy mifono mifono mifamatotra amina fotodrafitrasa tsy aluminium. Ny ACP dia matetika ampiasaina amin'ny cladding ivelany na amin'ny endrika trano, insulation, ary signage.
Aluminium Coil & lafaoro Annealling
Ankoatry ny karazana firaka aliminioma, ny fananana aliminioma vita amin'ny aliminioma dia singa lehibe ihany koa, indrindra ny toetran'ny mekanika ny alimo aluminium. Ny fanandramana fampisehoana dia ampahany lehibe amin'ny fanodinana alloza aluminium mahazatra. Ity dingana ity dia mandinika ireo toetra mekanika sy fanodinana isan-karazany amin'ny vokatra firaka aliminioma.